Bogga ugu weyn 25ka ugu Sarreeya ee Shabakadaha Lacagta Ugu Badan Bixiya 2022 | Shirkadaha Ugu Fiican
isha sawirka: www.newspiner.com
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay in suuq -geynta shabakadda aad ugu jeceshahay oo soo bandhigaysa lacagihii waaweynaa ee uu sameeyay toddobaad gudihiis. Oh, waan hubaa tan!
Kuwo badan ayaa ku soo booday suuq -geynta shabakadaha kuwa caanka ah tusaale ahaan sababta oo ah waxay u arkeen inay yihiin kuwa suuq -geynta shabakadda ugu mushaharka badan warshadaha.
Hagaag, waxaan dhihi doonaa, fiiri ka hor intaadan boodin!
Sidaa darteed, wax ka baro Suuq -bixiyeyaasha Shabakadda Lacag -bixinta ugu Sarreeya oo ku -celcelinta xeeladaha. Wakhti sii sidoo kale waxaadna heli doontaa natiijooyinkooda.
Dhanka kale, ka hor intaadan gelin mushaarka, waa maxay suuqgeynta shabakadda?
Waa maxay Suuqgeynta Shabakaddu?
Suuqgeynta Shabakaddu waa qaab ganacsi oo ku tiirsan iibinta qof ahaan iyada oo loo marayo wakiilo madax-bannaan oo inta badan ka shaqeeya guriga.
Shirkadda suuq -geynta shabakadda, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad dhisto shabakad shuraako ganacsi ama alaab -qeybiyeyaal si ay kaaga caawiyaan jiilka hoggaaminta iyo iibinta dhow. Waa ganacsi iib ah oo toos ah kaas oo iibiyayaashu ay si madaxbannaan ugu shaqeeyaan si kor loogu qaado badeecadaha ama adeegyada.
Dadka wax iibiya ama wakiiladu waxay u shaqeeyaan si madaxbannaan; cid kasta oo shaqaaleysiisa waxay ku dhiirrigelisaa inay qortaan oo tababaraan saraakiil badan; markaa iyagana, markooda, waxay ku dhiirri -galiyaan wakiilada ay shaqaalaysiiyaan inay sidaas oo kale sameeyaan.
Waxaan sidoo kale u tixraacnaa qaabkan MLM (suuq geynta heerar badan), suuqgeynta gudbinta, iyo suuqgeynta gacanta. Wakiilka cagaaran wuxuu guddi ka helaa iibinta dhammaan wakiillada hoose.
Suuqgeynta Shabakaddu waa ganacsi aad u weyn oo iibka adduunka oo dhan ka badan boqollaal bilyan oo doollar sannadkii. Dalalka qaarkood waxay xaddidaan ama mamnuucaan qaabaynta noocan ah; caadi ahaan, ka dib markii kiis khiyaano aad u weyn uu soo gaaro warka.
Habkani wuxuu ku kasbadaa komishanka dakhliga wakiilka ee iibka u gaarka ah iyo sidoo kale dakhliga iibka ee ciidanka wax iibinta ee ay qoreen wakiilka iyo shaqaalihiisu.
Waxaa jira shirkado badan oo sumcad ku leh suuqgeynta, laakiin qaar ayaa lagu cambaareeyay inay yihiin qorshayaal Ahraam. Tan dambe ayaa laga yaabaa inay xoogga saarto iibinta macaamiisha marka loo eego shaqaalaysiinta iibiyeyaasha kuwaas oo laga yaabo inay hore u bixiyaan xirmooyinka bilowga ah ee qaaliga ah.
Hoos waxaan ku qori doonaa Suuqgeeyayaasha Shabakadda Lacagta ugu Badan.
Ganacsadayaasha shabakadu lacag ma sameeyaan?
Sidoo kale akhri: 15 buug oo ugu fiican suuqgeynta dhijitaalka ah | 2022 waa in la akhriyo
Waxaa hubaal ah in ay suurtogal tahay in suuq -geeyaha shabakaddu uu lacag sameeyo, laakiin aanay u badnayn.
Dadka qaarkood waxay ku leeyihiin guulo waaweyn suuqgeynta shabakadda, inta badan sababta oo ah awoodda ay u leeyihiin inay ku soo jiitaan xubno badan shabakadda oo ay si fiican u baaraan ka hor inta aysan dhex gelin suuq -geynta shabakadda.
Waxaa jira laba ilaha dakhli ee ugu waaweyn: iibinta badeecadaha iyo guddiyada. Dad badan oo ku jira hoostaada hoose, ayaa lacag badan oo aad urursan doontaa, waxaa badanaya kooxda aad qori karto, lacag badan ayaad samayn kartaa.
Dadka intooda badan ee ka qayb qaata barnaamijyada suuq -geynta shabakadda ee sharciga ah ayaa sameeya wax yar ama lacag la'aan. Dadku waxay lumin karaan lacag; Qaar baa laga yaabaa inay ku dhex milmaan mashruuca haramka sharci -darrada ah oo ay ku guuldareystaan ​​inay ogaadaan inay ku biireen shirkad khiyaano leh oo laga yaabo inay lumiyaan wax kasta oo ay maalgashadaan.
Baar oo weydii su'aalo ka hor intaadan quusin.
Akhri: 10ka Qareen ee ugu Mushaharka Badan Mushaarka Sanadka 2022 | Dalalka Ugu Fiican
Sidee bay suuq -geeyayaasha shabakaddu lacag u helaan?
Waxaa jira laba ilaha dakhli ee suuq -geeyayaasha shabakadda:
1. Lacag ka timid iibinta alaabta/adeegyada. Marka qaybiyayaashu bilaabaan, qaybtan badiyaa waxay ka dhigtaa inta ugu badan dakhligooda.
2. Komishanka iibka xubnaha kooxda/liisaska hoose. Haddii qaybiyayaashu ay ballaariyeen shabakadooda waqti ka dib iyagoo shaqaaleysiiyay khadadka hoose, guud ahaan waxay ka badan tahay dakhliga iibiyaha qaybiyaha kasta.
In kasta oo hoos -hoos -u -dhigga qaybiyaha uu leeyahay, ayaa lacag badan uu ka helaa guddiyada.
Qaab -dhismeedyada komishanku way kala duwan yihiin waxaana laga yaabaa inay marka hore u muuqdaan kuwo cakiran, laakiin guud ahaan, waxay kuu oggolaanayaan inaad hesho boqolkiiba iib kasta oo khadkaaga hoose uu sameeyo.
Sidaa darteed, hadba sida ay kooxdaadu u weynaato, ayaa lacag badan kuu soo geli doontaa.
Markay meheraddu ka wareegto tafaariiqda asaasiga ah ee shaqaalaysiinta, mas'uuliyadaha sidoo kale way is beddelaan. Kooxda qorista, tababarka, iyo la-talinta ayaa noqota mid aad muhiim u ah oo waqti qaadata, iibinta badeecada wax yar. I
t mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa dakhli haraaga ah haddii aad sii waddo inaad lacag samayso adigoon si firfircoon u iibin ama iibin.
Mid ka mid ah suuqgeeyayaasha shabakadda aagga ayaa u baahan inay maamulaan khadkooda hoose waa xisaabinta iyo u hoggaansanaanta canshuuraha. Marka la soo koobo, suuqgeynta shabakadu waa fursad ganacsi oo dhab ah oo, sida ganacsi kasta oo kale, u horseedi kara guul dhaqaale.
Intee in le'eg ayay suuq -geeyayaasha shabakaddu sameeyaan?
Adigoo ah suuq -geyste shabakad, awooddaada kasbashada ee suurtogalka ah waa “mid aan xad lahayn” waxaana ku xaddidan kaliya ballanqaadkaaga sababta.
Laakiin dhab ahaantii, samaynta lacag shirkad suuq -geynta shabakadda ayaa sidoo kale lacag ku kacda.
Kaliya ku maalgalinta xirmada bilowga wax kasta oo aad iibiso ka dibna ku qaadashada saacad usbuuc suuqgeyn ma ku siineyso mushaharka lixda ah ee la damcay.
Maqaal ka yimid Inc.com wuxuu ogaaday in celceliska xirfadlaha iibka suuqgeynta shabakadda uu sameeyo qiyaastii $ 2,400 sanadkii iibinta alaabada. Marka, kaliya kuma filna inaad ka tagto shaqadaada markaad haysato mid, laakiin koror wanaagsan oo dakhligaaga ah haddii aad rabto.
Sidee loo noqdaa suuqgeeye shabakad?
Si aad u noqoto suuq -geeya shabakad, waxaad u baahan tahay inaad qabato hawshaada. Si fiican uga baaraandege shirkadda suuq -geynta shabakadda ka hor intaadan wax gelin. Akhri buugaagta elektiroonigga ah ama maqaallada khabiirada suuqgeynta shabakadda oo faham waxa adiga kuu fiican.
Tallaabada xigta, dooro hadaf aad ka shaqayn karto. Waxay noqon kartaa yool maalinle ah, bille ah ama toddobaadle ah. Hubi inaad ka shaqayso hadafyadan. Waxay u adeegi doonaan inay u noqdaan aasaas adag safarkaaga suuq -geynta shabakadda.
Tag tababar ay qabanqaabisay shirkad kasta oo aad go'aansato inaad ku biirto. Qaado tababarkan si dhab ah. Intaas ka dib, samee qorshe ku shaqaynaya yoolalkaaga kuna taageer ficillada. Dib -u -eeg falalka aad samaysay toddobaad kasta ama bil kasta si aad u ogaato waxa laga yaabo inaad khalad samaysay oo aad saxdo lagama -maarmaanka.
Sheekada guushu waxay ka bilaabataa qorshe waxaana lagu taageeraa falalka.
25ka ugu Sarreeya ee Shabakadaha Shabakadda Ugu Dakhliga/Lacagta Badan Caalamka
1. Igor Alberts & Andreea Cimbala-
Igor Alberts wuxuu ka yimid Netherlands. Isagu waa halyeeyga warshadaha suuqgeynta shabakadda oo leh waayo -aragnimo ka badan 30 sano, xaaskiisa Andreea Cimbala (oo ka timid Talyaaniga) oo sidoo kale ah lamaanihiisa ayaa leh khibrad 5 sano ah.
Shirkadoodu waa DagCoin - Warshada Guusha.
Waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 21,600,000 sanadkii. Dakhligooda nololeed waa $ 150,000,000.
Waxay yihiin Suuq -bixiyeyaasha Shabakadda Lacag -bixinta ugu sarreeya adduunka.
2. Ivan & Monika Tapia
Lammaanahan waxay ka yimaadeen Mareykanka Mareykanka.
Ururkoodu waa IM Mastery Academy.
Waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 18,000,000 sanadkii. Dakhligooda nololeed waa $ 28,000,000.
3. Trin & Jirawan Vichaidith
Labaduba waxay ka yimaadeen Thailand. Ururkoodu waa Nu Skin.
Dakhligooda sanadlaha ah waa $ 16,020,000 oo dakhligiisu yahay $ 19,000,000.
4. Jenna Zwagil
Jenna waxay ka timid Mareykanka dakhligeeda sanadlaha ah waa $ 12,720,000 iyo dakhli nololeed oo dhan $ 12,000,000.
Warshadeedu waa MyDailyChoice.
Waa mid ka mid ah Suuq -bixiyeyaasha Shabakadda Lacagta ugu sarreeya.
5. Duufaan Wellington
Safiirkii 1aad ee Isbedelka Nolosha Total.
Waxay ka timid USA dakhligeeda sanadlaha ah $ 12,000,000 iyo dakhli nololeed oo dhan $ 25,000,000.
Suuqgeynta shabakadu waxay ku bixin kartaa lacag aad u badan qofka odayga ah.
6. David Imonitie
Waa samafale, ganacsade, iyo tababare. Waa aasaasaha IBelieve Foundation.
David wuxuu ku nool yahay Texas, USA dakhligiisa sanadlaha ah $ 10,380,000 iyo dakhligiisa oo dhan $ 23,000,000.
Waa mulkiilaha shirkad suuqgeynta shabakadda oo leh mushaharka ugu badan.
7. Jason Brown & Matthew Rosa
Dhalinyaradan ayaa fadhigoodu yahay Maraykanka. Waxay bishiiba ku kasbadaan $ 250,000 IMarketsLive dakhli sanadeed ah $ 9,600,000 iyo dakhli nololeed oo dhan $ 5,000,000.
8. Allan Badilla & Laura Castro:
Suuqgeeyayaasha Shabakadda kale ee ugu Lacagta Badan waa Jason iyo Matthew.
Waxay ku nool yihiin Costa Rica. Waxay bishiiba ka helaan $ 730,000 komishan BE oo dakhli sanadeed ah $ 8,760,000 iyo dakhli nololeed dhan $ 3,000,000.
9. Rolf Kipp
Rolf waa qofka ugu mushaharka badan abid abid.
Wuxuu ku nool yahay dalka Jarmalka dakhligiisa sanadlaha ah waa $ 8,400,000 halka dakhligiisuna yahay $ 100,000,000.
Lacagtan suuqgeynta shabakaddu waa mid soo jiidasho leh.
10. Bryce Thompson
Ganacsade guulaystay 24 sano, oo fadhigiisu yahay USA, una shaqeeya IM Master Academy.
Wuxuu qaataa $ 8,400,000 sanadkii. Dakhliga noloshiisa lama yaqaan.
11. Stefania Lo Gatto & Danien Feier-
Lammaanahaan awoodda leh ee shirkadda Suuqgeynta Shabakadda Jeunesse waxay ka yimaadeen Talyaaniga & Jarmalka siday u kala horreeyaan.
Waxay kasbadaan wadar ahaan $ 8,220,000 sanadkii dakhligooda nololeedna waa $ 16,000,000.
12. Kooxda Yager (Dexter Yager)
Dexter wuxuu ka yimid USA.
Wuxuu mar kormeeray kala bar shabakadda iibka caalamiga ah ee Amway ee 2 milyan oo qof.
Wuxuu kasbadaa dakhli sanadle ah $ 7,200,000 iyo dakhligiisa oo dhan $ 460,000,000.
Yager waa mid ka mid ah Suuq -bixiyeyaasha Shabakadda Lacagta ugu sarreeya.
13. Lulian Cimbala
Lulian wuxuu ku nool yahay Japan wuxuuna qaataa $ 565,000 komishanka DagCoin - Warshadda Guusha bil kasta.
Wuxuu kasbadaa $ 6,780,000 sanadkii iyadoo cimrigiisu yahay $ 8,000,000.
14. Nathalie Nicole Smith
Nathalie waxay iskaashi la samaysay Isbeddellada Nolosha ee sannadka 2015 oo in ka yar hal sano waxay bilowday inay samayso 6 tirooyin.
Waxay fadhigeedu yahay USA waxay kasbataa $ 6,636,000 sanadkii iyada oo dakhliga noloshiisu yahay $ 4,000,000.
Natalie waa mid ka mid ah suuq-geeyayaasha shabakadda ee ugu mushaarka badan
15. Ana Cantera
Iyadu waa tii ugu horraysay ee IBO ee gaadha darajada Safiirka Fulinta ee TLC ee Latin America.
Waxay kasbataa $ 6,300,000 sanadkii iyada oo dakhliga noloshiisu yahay $ 4,000,000.
Sidoo kale akhri: Waa Kuwee Kuwa Ka Qalin -jabiya Kuleejka Ugu Lacagta Badan? | Xirfadaha Sare iyo Dugsiyada Sanadka 2022
16. John Haremza
John waa ganacsade shabakad leh in ka badan 30 sano oo waayo -aragnimo ah, kuna nool Mareykanka. Wuxuu iskaashi la leeyahay Valentus waana mid ka mid ah shuraakada ugu sareysa. Wuxuu sameeyaa $ 6,000,000 sanadkiiba isagoo cimrigiisu yahay $ 23,000,000.
17. David Liciaga
Isagu waa suuq -geyste shabakad (kan ugu sarreeya) Shirkadda Epic Trading Company, USA. Wuxuu kasbadaa $ 6,000,000 dakhli sanadeed iyo $ 4,200,000 dakhli nololeed.
18. Damon Aleczander-
Isagu waa mid ka mid ah suuqgeeyayaasha shabakadda ugu sarreeya ee shirkadda Epic Trading. Wuxuu kasbadaa $ 6,000,000 sanadkii dakhli noloshiisa oo dhan $ 3,000,000.
19. Khaalid Shaath
Mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan Shabakadda Dubli - Ominto, UAE. Wuxuu kasbadaa $ 5,760,000 sanadkii dakhli dhan $ 15,000,000.
20. Alfred Nickson
Alfred waa suuq -geeya shabakad Adeegyada Waxbarashada Maaliyadeed, USA.
Wuxuu kasbadaa $ 5,436,000 sanadkii iyadoo dakhligiisu yahay $ 5,000,000.
21. Andreas Matuska
Andreas waa ganacsade 24 jir ah oo ka yimid Monaco. Wuxuu bilaabay iskaashi lala yeesho Lyconet markii uu jiray 18 sano.
Wuxuu sameeyaa $ 5,412,000 sanadkiiba wadar ahaan dakhli dhan $ 2,000,000. Isagoo ka dhigaya mid ka mid ah Suuq -bixiyeyaasha Shabakadda Lacagta ugu sarreeya.
22. Mark & ​​Judy Willodson
Lammaanahan ayaa ah kuwa ugu mushaharka badan shirkadda Elepreneurs, USA.
Dakhligooda sanadlaha ah waa $ 5,412,000 halka wadarta dakhligoodu yahay $ 6,000,000.
23. Jeff Roberti
Mid ka mid ah kuwa dakhligoodu sarreeyo ee Taariikhda Suuqgeynta Shabakadda waa Jefff.
Wuxuu ahaa waardiye jebiyey ka hor inta uusan ku soo biirin adduunka suuqgeynta shabakadda wuxuuna hadda ka mid yahay kuwa ugu mushaharka badan shirkadda Juice Plus+, USA.
Wuxuu kasbadaa $ 5,400,000 sanadkii iyadoo dakhligiisu yahay $ 10,500,000.
24. Calvin & Shannon Becerra
Waxay ku jireen Warshadaha Suuqgeynta Shabakadda muddo 12 sano ah. Waxay leeyihiin kooxo ka badan 1 milyan oo qof in ka badan 120 shirkadood oo ay ku jirto Jeunesse, USA.
Ganacsadayaashan Shabakadda Lacag -bixinta ugu Sarreeya waxay kasbadaan $ 5,400,000 sannad walba iyada oo nolosha oo dhan ay ka soo gasho $ 11,000,000.
25. Roald Mailly & Patricia Numanare
Waxay hadda yihiin mid ka mid ah khabiirada ugu waaweyn Suuqgeynta Shabakadda ee Nederlands oo leh mushaharka ugu sarreeya, iyaga oo leh Guusha 4 Dhammaan - OneDream Kooxda OneLife oo ka baxsan xuduud kasta oo adduunka ah.
Waxay kasbadaan $ 128,000 bil kasta iyo $ 4,980,000 sanadkii iyadoo noloshooda ay kasbato $ 6,000,000.
Sidoo kale akhri: Shaqooyinka IT -ga ee ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka Xirfadood ee IT -ga ugu sarreeya sanadka 2022
Su'aalaha ugu sarreeya ee Suuqgeynta Shabakadda Lacag -bixin
Intee in le'eg ayay qaadataa in lacag lagu helo suuqgeynta shabakadda?
Taasi waxay ku xiran tahay hadafyadaada. Haddii aad rabto inaad dhowr dollar sameyso bishii, waxaad u badan tahay inaad ku qaadato shan saacadood toddobaadkii ama ka yar inaad samayso. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad dhisto dakhli waqti-buuxa ah, shaqada ka joojiso madaxaaga, oo aad ku raaxaysato waqti dheeri ah, waxaad u baahan tahay inaad maalgeliso ugu yaraan 15 saacadood toddobaadkii. Waxa ugu weyn ayaa ah inay jiraan agabyo halkaas ka jira oo kaa caawinaya inaad sida ugu habboon uga faa'ideysato waqtigan.
Ma inaan ka tagaa shaqadayda hadda ee suuqgeynta shabakadda?
Maya. In ka badan 90% dadku waxay bilaabaan xirfadooda suuqgeynta shabakadda waqti-dhiman. 7-10 saacadood toddobaadkii ayaa ku filan suuqgeynta shabakadda. Marka dakhliga suuqgeynta shabakadaadu sii kordho, u dhis sanduuq naftaada. Haddii dakhligaaga isku-xirka uu ka badan yahay mushaarkaaga, waxaad dib u qiimeyn kartaa booskaaga. Habkan, waxaad yeelan doontaa nabadgelyo iyo dakhli deggan marka aad baratid oo aad hormariso ganacsigaaga cusub.
Intee in le'eg ayay igu kacaysaa inaan bilaabo?
Qaddarka dhabta ahi wuxuu ku xirnaan doonaa baahiyahaaga iyo yoolalkaaga. Bilaabidda xirfadda suuqgeynta shabakadda guriga waa mid aad u jaban marka la barbar dhigo nooc kasta oo xafiiska guriga ah. Haddii aad rabto, waxaad iibsan kartaa badeecado shaqsiyeed oo aad dooratay. Ma jiraan wax diiwaangelin ama khidmad xubinnimo. Uma baahnid inaad iibsato qalab badan maadaama waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay taleefan iyo goob shaqo si aad u bilowdo; kombiyuutarku wuxuu faa'iido u leeyahay dukaamaysiga internetka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan kharashyo dheeraad ah: kaararkaaga ganacsiga, iibsashada buug -yaraha shirkadda, dukumentiyada tababarka, DVD -yada, iwm.
Waa maxay noocyada badeecadaha ee loo isticmaalo suuqgeynta shabakadda?
Suuqgeynta Shabakaddu waxay diiradda saaraysaa ugu horrayn badeecadaha waxtarka leh (waxyaabaha la isticmaalo). Badeecadaha la isticmaali karo waxaa ka mid ah caafimaadka, quruxda, alaabta nafaqada, iyo kuwo kale. Alaabta noocan ah waxaa adeegsada macaamiisha ama tafaariiqleyda oo leh amaro cusub oo badeecada ah.
Ma inaan la kulmaa dad badan?
Qaddarka dhabta ahi wuxuu ku xirnaan doonaa baahiyahaaga iyo yoolalkaaga. Bilaabidda xirfadda suuqgeynta shabakadda guriga waa mid aad u jaban marka la barbar dhigo nooc kasta oo xafiiska guriga ah.
Haddii aad rabto, waxaad iibsan kartaa badeecado shaqsiyeed oo aad dooratay. Ma jiraan wax diiwaangelin ama khidmad xubinnimo. Uma baahnid inaad iibsato qalab badan maadaama waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay taleefan iyo goob shaqo si aad u bilowdo; kombiyuutarku wuxuu faa'iido u leeyahay dukaamaysiga internetka.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan kharashyo dheeraad ah: kaararkaaga ganacsiga, iibsashada buug -yaraha shirkadda, dukumentiyada tababarka, DVD -yada, iwm.
Gebogebadii, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo suuqgeeyo iyada oo la adeegsanayo dallacsiinta iyo xayeysiisyada suuqgeynta shabakadda.
Markaad taqaanid sida loo isticmaalo warbaahinta xayeysiiska si aad uga faa'iideysato, waxaad dhisi kartaa ganacsigaaga suuqgeynta shabakadda oo aad kobcin kartaa ganacsigaaga.
Hadda oo aad ogtahay, waxaad u baahan tahay inaad hoos ugu dhacdo meheradda oo aad abuurto waxyaabo kobcin doona ganacsigaaga oo dhisi doona shabakadahaaga!
Wax ka baro Suuqgeeyayaasha Shabakadda ugu Sarreeya ee Lacag-bixiyaha ah iyo bixinta suuq-geynta shabakadda.
Shaqooyinka IT -ga ee ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka Xirfadood ee IT -ga ugu sarreeya sanadka 2022
20 -ka ugu sarreeya ee u ololeeyayaasha ugu mushaarka badan 2022
21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Macallimiinta Hadda Waad Bilaabi Kartaa
10ka Taleefan ee Adduunka ugu qaalisan sanadka 2022
15 Farshaxanka Tattoo ee Ugu Sarreeya | 2021
Tattooing waa mid ka mid ah qaababka farshaxanka ugu da'da weyn ee loo yaqaan. Waxay ku lug leedahay abuurista erayo joogto ah ama ku meel gaar ah, calaamado, ama...
20 Shaqooyin Oo Lacag Badan Keeni Kara 2021
Kahor intaadan shaqo qaadan, waa inaad samaysaa xoogaa tixgelin ah, miisaamaysaa xulashooyinkaaga, ka dibna aad samaysaa…
Maalin dugsiyeedka caadiga ahi wuxuu bilaabmaa maalin kasta goor hore wuxuuna dhammaadaa fiidka. Sida aad u daashay…
21 Goobo sharci ah sida Craigslist si aad u iibsato oo aad u iibiso alaabada la adeegsaday 2022
Waxaa jira sababo asaasi ah oo ay dadku wax u iibsadaan. Sababaha ugu horreeya ee ay dadku lacag ugu bixiyaan goobaha sida Craigslist…